သတင်း - Y81 ဟိုက်ဒရောလစ်အက်ဆစ်သတ္တု baler ၏လုပ်ဆောင်မှုစနစ်အပေါ် ဆီအပူချိန်လွှမ်းမိုးမှု
1. ဟိုက်ဒရောလစ်သတ္တု baler ၏အလုပ်လုပ်သောစနစ်အတွက်မြင့်မားသောဆီအပူချိန်ကိုထိခိုက်စေသည်။ မြင့်မားသောဆီအပူချိန်သည် ဟိုက်ဒရောလစ်သတ္တု baler ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာစနစ်ရှိ ရော်ဘာဖျံနှင့်ရေပိုက်များ အိုမင်းခြင်း သို့မဟုတ် ယိုယွင်းလာမှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို ထိခိုက်စေကာ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို ဆုံးရှုံးစေကာ ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်ယိုစိမ့်မှုကို ဆိုးရွားစွာဖြစ်စေပါသည်။ အထူးသဖြင့် ဟိုက်ဒရောလစ် servo စနစ်အတွက်၊ ၎င်း၏အလုပ်၏တည်ငြိမ်မှုကိုထိခိုက်စေသည်၊ အလုပ်တိကျမှုကိုလျှော့ချသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်သည် မြင့်မားသော အပူချိန်တွင် ပုံမှန်ဖြစ်လေ့ရှိပြီး ချောဆီဓာတ်တိုးယိုယွင်းခြင်း၊ ပျစ်ဆွတ်ကျဆင်းခြင်း၊ ချောဆီ၏လုပ်ဆောင်ချက် ဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်စေသည်။
ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်၊ ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီ၏အပူချိန် Y81 ဟိုက်ဒရောလစ်အက်ဆစ်သတ္တု ဖဲချပ်ပုံမှန်စစ်ဆေးတွေ့ရှိပြီး အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန်မှာ ယေဘုယျအားဖြင့် 55~60 ℃ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အမှန်တကယ် အလုပ်တွင် အပူချိန်လွန်ကဲသော အခြေအနေအောက်တွင် ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီ၏ demulsification စွမ်းဆောင်ရည်ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်။ ရလဒ်များက အပူချိန် 55 ~ 60 ℃ တွင် demulsification time သည် 15 min ဖြစ်ပြီး အပူချိန်သည် process control range တွင် အနည်းငယ်သွေဖည်သွားကြောင်း ညွှန်ပြသော်လည်း ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီ၏ demulsification စွမ်းဆောင်ရည်ကို မထိခိုက်စေကြောင်း ရလဒ်များက ဖော်ပြသည်။
2. ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်အပေါ်နိမ့်သောအပူချိန်လွှမ်းမိုးမှု။ အရှေ့မြောက်ဆောင်းရာသီတွင်၊ အထူးသဖြင့် baler သည် စက်ပစ္စည်းများကို အဆက်မပြတ်လည်ပတ်နေသည့်အခါတွင်၊ အိမ်တွင်းအပူချိန်သည် နိမ့်ပါသည်။ အပူချိန်အလွန်နိမ့်နေနိုင်သည်၊ ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီ၏ အရည်ထွက်မှုသည် စေးကပ်မှု သို့မဟုတ် စုစည်းမှုဖြစ်လာနိုင်ပြီး ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်တစ်ခုလုံး၏ စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းလာမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် အပူချိန်အလွန်နိမ့်သောကြောင့်၊ အပူပိုင်းချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် ကျုံ့ခြင်းနှင့် အအေးတွင် ရော်ဘာတင်းမာခြင်းတို့ကြောင့်၊ အလုံပိတ်ကွင်း၊ ပန့်၊ အဆို့ရှင်၏ စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဟိုက်ဒရောလစ်သတ္တု baler ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုစနစ်ကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အကျိုးသက်ရောက်စေမည်ဖြစ်သည်။ အတိုင်းအတာ။
3. မတူညီသောဒေသများရှိ ဖောက်သည်များအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် သက်ဆိုင်ရာ အပူနှင့် အအေးပေးစက်များ ရှိသည်။ Y81 ဟိုက်ဒရောလစ်အက်ဆစ်သတ္တု ဖဲချပ်.
Aluminum Foil Baler စက်, Pop-Top Can Baler ကိရိယာ, အပိုင်းအစ သတ္တုကြိတ်စက်, Leaf Compactor နှင့် Baler, အိမ်လုပ်ကတ်ထူပြားဖဲချပ်, Y81 ဟိုက်ဒရောလစ် Baler,